Padmaavat Business Update: filimka Padmaavat ganacsigiisa halka uu maraayo mudo 7-isbuuc kadib – Filimside.net
Taariikhda: March 18, 2018
Inaba caadi ma ahan filimka Padmaavat ayaa 2.32 Crore (Trade Figure) keenay todobaadkiisa 7-aad taasi oo ganacsigiisa filimkaan ka dhigtay 282 Crore (Trade Figure) sida shabakada BOI soo daabacday.
Waxaa cajiib ah in filimka Padmaavat uu gobolka CI ka keenay 7 Crore ilaa haatan asigoo mudo sedex todobaad halkaas laga daawanayo madaama todobaadyadii hore xayiraad halkaas ka saarneyn daawashadiisa.
Waxaa muuqato in Padmaavat oo Blockbuster weyn ah ganacsigiisa ku istaagi doono 285 Crore (Trade Figure) waana lacag aad u badan.
Bahubali – The Conclusion ayaa todobaadkiisii todobaad keenay 2.46 Crore halka Padmaavat uu keenay 2.32 Crore weliba ayadoon Gujarat iyo Rajasthan laga daawaneyn taasi oo muujineyso sida Padmaavat uu u yahay Blockbuster siweyn u hirgalay.
Gadar Ek Prem Katha ayaa ah filimka todobaadka todobaad ganacsiga ugu badan sameeyo kaasi oo keenay 4.95 Crore waxaana xusid mudan in filim kale uusan jirin xitaa 3 Crore ganacsi ahaan gaaray todobaadkiisa todobaad marka Gadar meel la dhigo waa filimada Blockbuster-da ah aabahood!!
Fadlan hoos kaga bogo filimka Padmaavat ganacsiga uu sameeyay mudo 7-isbuuc ah sida shabakada BOI soo daabacday:
Todobaadka kowaad – 159.47 Crore
Todobaadka labaad – 66.93 Crore
Todobaadka sedexaad – 30.09 Crore
Todobaadka afaraad – 13.44 Crore
Todobaadka shanaad – 5.91 Crore
Todobaadka lixaad – 3.96 Crore
Todobaadka todobaad – 2.32 Crore
Wadarta Guud – 282.18 Crore (Trade Figure)